सात लाख कित्ता साधारण सेयरको बिक्री प्रक्रिया अचानक रद्द ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
सात लाख कित्ता साधारण सेयरको बिक्री प्रक्रिया अचानक रद्द !
काठमाण्डौं । नेपाल बैंकले तारागाउँ रिजेन्सीको शेयर लिलामको प्रक्रिया रद्ध गरेको छ । नेपाल बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तारा गाउँ रिजेन्सी होटलको सात लाख कित्ता साधारण शेयर लिलाममा राखेको थियो । साथै बैंकले लिलामको शेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका आवेदकलाई बोलपत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
यसअधि नेपाल इन्स्योरेन्सको दश लाख कित्ता शेयर लिलाम गरेको बैंकले तारागाउँको शेयर लिलामी प्रक्रिया भने एकाएक रद्ध गरेको हो ।
तारागाउँको शेयर लिलामीको लागि बैंकले सिद्धार्थ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्ती गरेको थियो । पहिलो पटकको लिलामी सूचना प्रकाशीत गरेको अवधिभर आवश्यक मात्रामा आवेदन नपरेपछि बैकले पुन म्याद थपेर द्रोस्रो पटक सूचना प्रकाशीत गरेको थियो ।
तारागाउँको शेयर बिक्रीका लागि नेपाल बैंकले तारा गाउँ होटलसँगनै कुरा छिनोफानो नगरी एकैपटक लिलामीमा गएकोले रद्ध गर्नु परेको बुझिएको छ । तारा गाउँसँगको कुरा टुङ्एिपछि पुन लिलामको सूचना जारी हुने बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
बैंकले लिलामी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको सूचना प्रकाशीत गर्नु अगाडि आवेदन दिएका आवेदकको बोलपत्र फिर्ता गर्ने जनाएको छ । जसका लागि आज सोमबार अपरान्ह तीन बजेसम्म सिद्धार्थ क्यापिटलमा सप्रमाण सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैंकले तारा गाउँ रिजेन्सी होटलको शेयर प्रति कित्ता दुई सय रुपैयाँमा नघटाई बोलकबोलमा लिलामीमा राखेको थियो ।सो शेयर बिक्रीबाट नेपाल बैंकले कम्तिमा १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको थियो ।
१७ जेठ २०७३, ९।००